Date: 13 mai 2015 - 12:22
Aiza kay azafady no misy fianarana Baiboly? Mianatra sabotsy raha mety.
Date: 13 mai 2015 - 12:55
raha protestanta fjkm no misy anao, SETELA ambatonakanga, miresaha am pastera aloha fa mila taratasy avy an aminy, iz no mandefa ny anaranao any.Rha izao aloha enao vo iditra de tara, to misy fidirana otran fianarana retra ihany iz io, asa na octobre na janvier.
misy iray ko oe safifa zay,otran mifampitohy ihany reo, ka ity safifa ity no kilasy voalohany rah ny fahafantarako azy, avy eo vo setela, anontanio pastera fa fantany tsara reo.
Date: 13 mai 2015 - 15:06
Misaotra tompoko, dia mety firy taona no mianatra ary ny fianarana amin'ny fiteny malagasy sa vahiny?
Date: 13 mai 2015 - 15:26
Tsy fantatro ny faharetany, fa manana fianakavina betsaka mianatra ao za, le nenitoko zay zao efa nahavita mémoire, ndraindray izy mitarika ftona ao ampiangonana.Am fiteny malagasy ny fampianarana.
Za ko maniry mba ianatra fa le fotona mitsy no mbola tsy mety. MIditra am 7h30 mirava am 09h30 ny setela.
Ny anay lazaina ao ampiangonana refa manomboka ny fisoratana anarana.
Mazoto am fanarahana ny Tompo, tsara io.
Date: 15 mai 2015 - 11:22
Misaotra betsaka @ fanampiana Setela, Misaotra @ fampaherezana e.
Date: 15 mai 2015 - 13:52
telo taona ny fianarana setela=sekoli teolojika laika; sefala= sekoli fampianarana laika (io indray dia ireo hihomana ho mpiandry na mpitoriteny na katekista) FJKM ihany koa io misy isaky ny synoda paritany to a telo taona ihany koa ny fiomanana
Date: 19 mai 2015 - 12:44
Misaotra indrindra tompoko amin'ny fifanampiana, tena efa manomboka mazava amiko ny lalana tokony halehako
Date: 19 mai 2015 - 16:02
Harimino sy Setela >>
raha ny hevitro dia any @ Ligue pour la Lecture de la Bible no mety kokoa, satria Soratra Masina no halalinina ao, études bibliques koa.
Efa mpianatra tao @ Setela ny tenako ( marihina fa FJKM za) fa fiofanana ho Mpitoriteny ny ao ary izany no mahatonga azy ireo ho afaka manampy ny mpitandrina na ny Katekista rehefa mahavita 2 taona.
Date: 20 mai 2015 - 10:43
Ireo mpampianatra baiboly moa izany ahoana , nahazo doctorat tany an danitra ve ?
Date: 20 mai 2015 - 12:11
Fa aiza ho aiza moa ry "b" no misy ny Ligue pour la Lecture de la Bible azafady? Misaotra tompOko.
Date: 20 mai 2015 - 12:49
fanontaniana kely ihany koa azafady, mety ve ny mianatra Soratra Masina ivelan'ny FFKM? Mety hafa mihitsy ve ny fampianaran'ireo fiangonana zandriny ireo ohatra MRE!
Date: 20 mai 2015 - 13:19
TOA EO @ TOTOHABATON'ANTANINARENINA, TSY DIA SUR ZA FA MANOTANIA OLONA IHANY
Date: 20 mai 2015 - 13:21
Fikambanan’ ny Mpiara-Mamaky
Date: 20 mai 2015 - 13:25
Misaotra indrindra e dia tahian'ny Tompo.
Date: 08 mars 2016 - 06:42
Setela hianarana raha handalina baiboly dia izay vao mankany amin'ny Ligue pour la lecture de la bible ianao. Ny anton'izany ny Setela tena mampianatra anao ny fototra ara-baiboly mihitsy izay tsara hiorenana mba tsy ho voataona ny fampianaran-tsamihafa ianao. Efa nanao sefala ihany koa aho talohan'ny Setela fa hitako hoe tsara kokoa ny Setela raha resaka fandalinam-pinoana. Izany tsy manakana anao handeha any amin'ny FMB avy eo.
Mbola afaka miditra Setela izao fa vao tamin'ny Février teo no niditra. 2 taona ny faharetan'ny fampianarana saingy raha mbola te hanohy ianao dia afaka manao 3 taona mianatra Hebreo sy Grika.
Isaky ny alatsinainy na Sabotsy no mianatra misafidy ny iray amin'ireo.
Par: ny tena marina
Date: 06 avril 2016 - 17:00
Voalohany indrindra aloha ho ani Harmino, raha te hianatra ny Baiboly ilay Tenin'Andriamanitra Velona sy Marina ianao dia misy fahamarinana iRAY izay tokony ho fantatrao ary voalazan'ny Baiboly dia hoe : tsy tokony ho @ andro Sabotsy no hianaranao izany satria ny andro sabotsy dia SABATAN' I JEHOVAH ka any ampiangonana no tokony hisy anao, midera sy manome voninahitra an Andriamanitra tompon'ny Sabata.
Faharoa,io Baiboly io dia Tenin'Andriamanitra ka Izy Tompony ihany no tokony hampianatra mivantana ny olona izay mangetaheta marina, satria raha mbola olombelona toa ahy sy ianao no hampianatra dia araka izay fandraisany azy sy izay eritreretin'ny sainy no ampianariny.
Izany hoe tsy fampianarana avy eto antany izay avy @olona no tokony horaisina fa fampianarana avy any ambony, dia avy amin'Andriamanitra IRERY ihany.
Ahoana anefa angamba hoy ianao no fomba hampianaran'Andriamanitra mivantana ny olona nefa ny olona aza tsy mifankahita Aminy akory?
Marina loatra izany. Saingy fantaro fa Jesosy Kristy dia manana ny fomba fiasany h@andron'ny Apostoly ka mandraka ankehitriny, dia mifidy olona mivantana izy ary mampianatra mivantana io olona io ( toy ireo Apostoly mpianany taloha), ka ianao no tokony hangetaheta hitady io olona nofidiany mivantana sy nampianariny io mba ahafantaranao ny tena Tenin'Andriamanitra marina dia ny Baiboly, satria @izao vaninandro farany hiainantsika izao dia MBOLA MISY TOKOA ny nofidian'i Jesosy Kristy mivantana.
Mety hiteny koa ianao hoe eissy! tsy marina izany fa milaza ho nofidian'i Jesosy daholo ny olona sasany nefa arnaque fotsiny izany. Tena marina mihitsy izany.
Ho fanampiako anao dia izao hoe : ny voany no ahalalanao ny hazo. Ka rehefa mianatra ianao, dia vakio miaraka @ mpampianatra anao ny baiboly mba ahafantaranao ny TENA MARINA.
Indro ary omeko anao ny lalana: manaraha ny fandaharana "VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA" AO @ FAHITALAVITRA KOLO-TV isaky ny @ 05ora sy Sasany maraina, isanandro isaky ny Alatsinainy ka h@ Zoma.
Dia mirary anao hahafantatra ny Marina rehetra ao @ Baiboly tompoko.
Par: "VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA"
Date: 08 avril 2016 - 18:20
Jesosy Kristy dia manana ny fomba fiasany h@andron'ny Apostoly ka mandraka ankehitriny, dia mifidy olona mivantana izy ary mampianatra mivantana io olona io
koa dia io "VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA" AO @ FAHITALAVITRA KOLO-TV isaky ny @ 05ora sy Sasany maraina" io izany no nofinidiny teto Madagasikara ?
dia MINOA FOTSINY IHANY tokoa angamba ry zareo a!
Date: 09 avril 2016 - 07:40
Manasa ny olona hianatra Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah, ary valiana amin’izany ny fanontaniana maro, ohatra hoe:
Tsy raharahain’Andriamanitra ve aho?
Ahoana no hanatsarako ny fifandraisanay mivady?
Ahoana no hahasambatra ahy?
Ho hitanao eto ambany ny valin’ireo fanontaniana fametraky ny olona momba ny fampianaranay Baiboly.
Ahoana no fizotran’ilay fianarana? Mifidy foto-kevitra iray izahay, ohatra hoe “Andriamanitra” na “fanambadiana”, ary mandinika an’ireo andinin-teny ao amin’ny Baiboly, izay mifandray amin’izany. Rehefa ampitahaina ireny andininy ireny, dia fantatra izay lazain’ny Baiboly manontolo momba an’ilay foto-kevitra ka ny Baiboly ihany no manazava an’ilay izy.
Mampiasa an’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? izahay mba hianarana ny Baiboly. Asehon’io boky io mazava tsara izay tena lazain’ny Baiboly momba an’Andriamanitra, Jesosy, ny hoavintsika, ary ny zavatra hafa.
Ohatrinona ny saran’ilay fianarana Baiboly? Maimaim-poana ilay izy, ary tsy vidina ireo fitaovana fianarana.
Maharitra adiny firy ilay fianarana? Maro no manokana adiny iray eo ho eo isan-kerinandro mba hianarana Baiboly aminay. Azo ovaovana anefa izany, arakaraka ny fandaharam-potoanan’ilay olona.
Inona no mitranga rehefa mangataka hianatra Baiboly aho? Hisy Vavolombelon’i Jehovah hitsidika anao amin’ny fotoana mety aminao sy any amin’ny toerana mety aminao, rehefa mangataka hianatra Baiboly ianao. Hasehony anao vetivety ilay fomba fianarana, ka raha tianao ilay izy, dia azo tohizina.
Tsy maintsy lasa Vavolombelon’i Jehovah ve aho raha manaiky hianatra Baiboly? Tsia. Tia mampianatra Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah nefa tsy manery an’iza na iza hanaraka ny fivavahany. Ekenay kosa fa manan-jo hifidy an’izay zavatra hinoany ny olona, ka asehonay amim-panajana izay lazain’ny Baiboly.—1 Petera 3:15.
Date: 12 avril 2016 - 13:19
Harimino> raha protestant ianao dia aza mivoana @ FFPM izany fa ho very ny fotopinoanao, vakio tsara ireo manjono eo ambony eo ireo: tokony any ampiangonana no hisy anao ny asabotsy bla bla bla sns....aoka isika ho mailo dia samia ka samy hijoro @ fotom-pinoantsika. Mahereza dia mirary soa, fiadanana ho anao.
Par: za nanao
Date: 13 avril 2016 - 16:28
za koa manentana anao hoe raha FFPM ianao dia izay fampianarana nitaizana sy nomena anao aloha fantarina tsara. mahaiza manavaka tsara ny fampianarana sy ny clientèlisme! mahereza hatrany
Par: Saoly lasa Paoly
Date: 15 avril 2016 - 09:56
Izaho manoka dia tsy mitovy hevitra ny amin'ny hoe izay notezaina ihany no arahina. Tsy fidiny ho anao no notezaina ao amin'ny misy anao io satria nolovaina avy amin'ny fianakavianao io.
Raha misy ny tokony tsy hivadika ho lasa kristiana ve tsy Saoly izay notezaina tao amin'ny fivavahana jodaisma?
Tsy vitan'ny notezaina tao izy fa tena nafana fò be mihitsy.
Nefa rehefa nampahafantarina azy ny marina momba an'i Jesosy sy ny fikasan'Andriamanitra dia lasa kristiana izy.
Fa raha te handila ny Baiboly ianao, inona no tanjonao?
Fahalalàna ara-tsaina fotsiny ve sa ny fanamafisana ny ara-panahinao (votre spiritualité) sy ny fisakaizanao amin'Andriamanitra?
Par: Manasa ny olona hianatra Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah
Date: 16 avril 2016 - 17:27
...fa izahay kosa manasa ny olona hamakafaka sy handalina ny fomba amam-panao ary ny foto-pisainana manjaka ao amin'ny "Vavolombelon’i Jehovah " era-tany hatramin'ny nisiany tany aminn'y taon-jato faha XIX ka hatramin'izao !
Par: za koa d'accord
Date: 19 avril 2016 - 19:22
efa nanambara fin du monde ve ny TJ ary tanteraka ve?
marina ve fa tsy manaiky ny transfusion sanguine ny TJ dia inona ny vokany?
Date: 21 avril 2016 - 12:18
samy hafa aloha ny dika teny eo @ Baiboly TJ sy Protestanta e na ny Katolika
Par: vao maika...
Date: 21 avril 2016 - 12:43
...manamafy izany ny maha asa-tanan-draolombelona ny baiboly!
tsy resahina akory ny fandikana vilana,ny fanamboarana na fanampiny nentin'ireo olona maro samihafa nampita an'ireo baiboly vakintsika io amin'izao fotoana izao
olombelona no nanoratra an'ireo arakarak'izay ninoany sy ny fijeriny izay rehetra nitranga teo amin'ny manodidina azy na eo amin'ny fianam-pireneny izany na eo amin'izay olana mety nitranga teo amin'ny sampana samihafa nisy teo amin'ny finoana narahiny (rafitra,fanavaozana foto-mpinoana,ady na fifaninana samihafa nisy teo amin'ireo samy milaza fa tompon'ny tena marina ...)
Date: 21 avril 2016 - 13:01
io tenin'i Tanorasoa io mitsy no mahatonga ny lazaiko hoe: raha protestanta ianao dia any @izay fampianarana misy ny protestanta mande, raha toa ianao katolika dia izay fianarana manaraka ny katolika mande, sns, raha tsy izany manko dia ho voarebireby ny foto-pinoanao ka mety ivadika finoana sns ianao aveo nefa tsy tena izay ilay tanjona notadiavinao, tsy maintsy hivona @ oe "ny anay ny finoana tena marina sns", gravy io rehefa tratrany.
Date: 21 avril 2016 - 13:57
Tsy miteraka olana velively ny fisian'ny dikan-teny samihafa raha ny mahakasika ny Baiboly. Tsy hoe raha mamaky ny baiboly vokarin'ny protestanta akory ianao dia misy filazana ao hoe manaova protestanta ny koa katolika dia manaova katolika nakoa tj dia manaova tj. Ary tena ampirisihina ary isika hanana dikan-teny samihafa ahafahana mampitaha sy mahatakatra izay voalaza ao.
Mila manana fomba fijery "ara-panahy" (fa tsy "ara nofo" koa isika vao hahatakatra ny voalaza ao.
Tsy haiko raha efa namaky ny Baiboly manontolo i "vao maika..." na mindrana izay voalazan'ireo mpitsikera ny baiboly fotsiny.
Taiza ho aiza teo amin'ny tantaran'ny baiboly ny nanomboka nisy ilay lazaina hoe "fanamboarana sy fanampiny"?
Ary ahoana no ahafahana milaza fa ity ilay "fanampiny" ary izatsy koa ilay "fanamboarana"?
Dia karazam-pinoana firy (izay nateraky ny "sampana samihafa") mahakasika ilay Andriamanitra lazaina ao koa, , izany no hita ao (nandritra ny taonjato 16 nisesy nanoratana azy, - 16 è siécle av JC au 1er siècle de notre ére)?
Date: 25 avril 2016 - 15:59
Ho an'i Eissyé :
Ao anatin'ny Baiboly dia IRAY ihany ny Finoana. Tsy misy "foto-pinoana Protestanta" izany voalaza ao na "foto-pinoana Katolika" na ny hafa koa.
Na hijery baiboly protestanta ianao na katolika na anglikana sns.. dia FINOANA IRAY IHANY no ifotoran'ny Kristiana rehetra, dia ny FInoana an'i Jesosy Kristy.
Voalaza mazava ao hoe inona marina izany atao hoe FINOANA , na ny hoe MINO an'I Jesosy Kristy.
Izany no ilàna ilay hoe FIANARANA BAIBOLY na ny Tenin'Andriamanitra tsy misy kilema.
Raha tsy izany mantsy dia manjary ny anaram-piangonanao no iorenan'ny finoanao dia manahirana ihany raha izany no atao hoe mivavaka.
Aza avela hisy hamitaka anareo hoy ny Tenin'Andriamanitra fa izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka Azy.
Ka na dia efa nitaizana ny razambe sy ny dadabe sy nenibe, ry dada sy neny sns aza kanefa hita fa diso tsy mifanaraka @ Tena marina voalazan'ny Baiboly dia tsy aleo ve ialàna, raha tena mangetaheta ny fahamarinana ianao sy te ho voavonjy.
Tsy clientélisme izany na fanjonoana olona sanatria fa fanokafana ny masom-panahin'ny Kristianina tsirairay hanompo an'Andriamanitra @ fanompoana marina ankasitrahany.
Par: f'angaha kosa re olona ...
Date: 26 avril 2016 - 19:39
...nisy niteny teo hoe fivadiam-pinona mety ateraky ny baiboly vakianao ny olana resahina ; raha ny voalaza eo ambony dia mazava :
-fandikana vilana na koa fanamboarana na koa aza fanitsiana na fitondrana fanampiny ...no voaresaka
-avy aiza io baiboly vakianao io ? im-piry nadika sy nanaovana fanitsiana izy io vao tonga teo anatrehanao ?
-efa nisy hatramin'izay ve ny baiboly sa niforona sy nosoratana niandalana ?
-io baiboly vakianao io tokoa ve no nisy hatraminy ampiandohany ?
ohatra tsotra :
-inona no soratra masina nisy talohan'ny -270 ?
-efa voatambatra ho ...baiboly ve ireo soratanana nisy tamin'izany ?
-rehefa navadika tamin'ny teny grika (LXX)ireo soratra masina avy tamin'ny teny hebreo nisy tamin'izany fotoana izany , nisy ve ny fanamboarana ? ny fitondrana fanampiny ?
-rehefa navadika amin'ny teny latina indray taon-jato vitsivitsy taty aorina (VULGATE)
fandika-teny fotsiny ve no nisy ? sa nisy notsoahina na nampiana ...?
neken'ny rehetra taty aoriana ve ireo boky nofidiana tao tamin'izany ( concile de Trente , safidy nataon'ireo izay namorona sy nanangana ny finoana loterana sy protestanta taty amin'ny taon-jato faha XVI ?
raha ny mahakasika ny hoe ny karazam-pinoana nisy dia tsara ny manamarika fa maro sampana tokoa ny finoana jiosy taty amin'ny taon-jato fahatelo/faharoa (talohan'ny taona nolazaina fa nahaterahan'i Jesoa) ; ny saducceana , esseniana , ny farisiana ...ary ireto farany no nanapaka ny tokony hisy ao anatin'ny baiboly izay noheveriny fa tena avy amin'ny Fanahy masina tokoa (taona +90 tany ho any);tsy nekeny ny boky sasantsasany voasoratra tao anatin'ny baiboly LXX satria nisy ...FANAMBOARANA sy FANAMPINY tsy nifanaraka tamin'ny BAIBOLY HEBREO izay LOHARANO NIPOIRANY !
etsy an-daniny dia maro tahak'izany koa ireo vondrona nanaradia an'i Jesoa ary mety samy nanana ny soratra masiny ireny sampna samihafa ireny ; efa 200-400 taona taty aoriana vao nanao sivana ireo ..."rain'ny eglizy" ka nilaza sy nanapaka fa ...ireto ihnay no hatao ao anatin'ny ...baiboly (misy hita taty aoriana ela ny sansantsan'ireo boky masina notsipahin'ny vondrona izay ...nandresy tamin'izany fotoana (izay lasa finoana katolika)
fanahiniana no nanoratako ireo fanamarihana vitsivitsy ireo amina endrika fanontaniana mba afahan'ny tsirairay mikaroka sy misaina izay hitany
Date: 28 avril 2016 - 13:03
Saoly lasa Paoly: izay nitaizana anao "ALOHA FANTARINA". tsotra be ny antony: antaonany maro ianao nakany ampiangonana anakiray, nanaraka ny fombany, sns ka mba tsara ihany ny ahafantaranao ny anton'ireny aloha alohan'ny andehananao hamantatra zavatra hafa. fantaro aloha hoy aho fa za tsy miteny hoe io ihany arahina. ny important amiko dia ny fanahantaranao izay inoanao sy ekenao. tsy manakana anao velively hivelatra hamantatra ny zavatra rehetra anefa izany.
izaho zao protestant FJKM: nanana namana TJ sy advantista, ireo namako anakiroa ireo dia samy FJKM fa izy nitorian'ny olona teny dia niova finoana. avy eo izy mitory teny amiko lazainy fa ny ahy indray no diso nefa tsy azony sady tsy fantany akory ny mikasika ny finoana FJKM, tsy azony akory hoe maninona izy no natao batisa mbola kely ary maninona no mandray fanasan'ny Tompo. izaho mpamaky bokimpivavahana koa nefa, tsy katolika aho fa mba tiako ho azo ny antony ivavahan'ny katolika amin'ny masina maria, ny antony isian'ny Papa sy ny andraikiny, sns fa zany tsy midika hoe hivadika katolika aho. izaho koa mamaky ireny boky mormon sy TJ reny ary boky advantista.
FJKM aho satria fantatro izay inoako ary tsy izaho velively no hiteny fivavahan'olona tsy fantatro fa io ange matoa misy fivavahana sy baiboly isankarazany dia mazava fa misy fampianarana tsy mitovy ao e.
Par: io indray a !
Date: 29 avril 2016 - 11:25
Hay ve ato indray ry RBNIR no manao pub e ! "VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA"=RBNIR="ny tena marina"
Date: 30 mai 2016 - 14:17
1) Raiso Jesôsy ho Tompo sy Mpamonjy anao !
« Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany @ Ray afa tsy amin’ny alalako (Jesôsy) »
2) Tandremo ny didiny : didy 10
Iray amin’izany ny Sabatan’i Jehovah : « Manamasina ny Sabatan’i Jehovah, ...
SABATA = SABOTSY (andro Fahafito)
3) Izay mino sy vita batisa no hovonjena :
Ny olona mino an’i Jesôsy sy vita batisa no handova ny PARADISA mandrakizay SINON very any amin’ny HELO
NB : Batisa : IMMERSION (dans l’eau) mais non Aspersion
BATISA tahaka an’i natao tamin’i JESÖSY (teny amin’ny ranon’i Jordana)
4) Mahareta hatramin’ny farany fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena
Koa tsy manao PUB aho fa mitory ny tena marina aminao : Henoy daholo ny Radio, fahita lavitra hitanao, fa izay tsy mivaona aminireo no SAFIDIO hitaizanao ny fanahinao !
Mahereza dia mazotoa amin’ny anaran’i Jesôsy !
Date: 16 juin 2016 - 14:04
F'anga moa mila ianarana ny baiboly fa tsy hay ho azy?
Date: 17 juin 2016 - 12:30
Diska goaka ny anareo e !
Par: mpetra tsara a!
Date: 20 juin 2016 - 11:19
mipetra tsara fa mahamenatra
Par: soa ihany
Date: 24 juin 2016 - 13:44
"zay mino sy vita batisa no hovonjena :
Ny olona mino an’i Jesôsy sy vita batisa no handova ny PARADISA mandrakizay SINON very any amin’ny HELO"
soa ihany za ry zalahy sy zavavy fa tsy teraka :
-talohan'ny nisian'i Jesoa
-na koa mety teraka taty aoriann'y nisiany fa saingy tany Chine na Japon ...na koa teto ...Madagasikara fa fony faha vazimba
fa tonga dia azo antoka fa efa kila firehitra any anatin'ny HELO za amin'izao isika miteny sy manoratra izao
misaotra an'i Jesoa manokana ny tenako fa nataony teraka tao anatin'ny fianakaviana efa nampanao batisa ny zanany (fa tsy tamin'irony ray aman-dreny mbola nananisina sy nanompo an-dr'Ikelimalaza irony) ary nasainy nianatra sekoly alahady ...isan'alahady hany ka tsy andriko izany handova ny PARADISA izany
mety somary alahelo kely ihany za na izany aza , rehefa hahita ireo namako sendra nipoitra avy tamina fianakaviana hafa izay nikiry velona namadika , nanompo sampy , nanao fanatitra sy fanamasinana tery Ambohimanga ... ary tsy mba vita batisa , ka may kila ao anatin'ny AFOBE !
Date: 30 juin 2016 - 08:41
Manasazy Olona any Amin’ny Afobe ve Andriamanitra?
TIAN’NY Vavolombelon’i Jehovah ny miresaka momba ny Baiboly amin’ny mpiara-belona aminy. Misy fanontaniana manitikitika ny sainao ve? Misy tianao ho fantatra ve momba izay inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fanaon’izy ireo? Aza misalasala àry manontany an’izay Vavolombelona mihaona aminao. Ho faly izy hamaly anao.
Toy izao ny resadresaka fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny olona. Aoka hatao hoe Manjaka no anaran’ilay Vavolombelona, ary Aritiana ilay olona iresahany.
Hanasazy ny ratsy fanahy ve Andriamanitra?
Manjaka: Manahoana i Aritiana!
Aritiana: Manahoana i Manjaka!
Manjaka: Nampieritreritra ahy ilay nolazainao tamin’ny farany iny.
Aritiana: Ilay inona moa izay?
Manjaka: Gaga be ianao naheno hoe tsy mino ny afobe izahay Vavolombelon’i Jehovah.
Aritiana: Ie. Gaga mihitsy aho. Tsoriko aminao fa tsy mety heken’ny saiko mihitsy hoe tsy mino an’izany ianareo.
Manjaka: Misaotra anao aloha tsy nisalasala nilaza ny hevitrao e! Tsara foana mantsy ny mihaino izay mba hevitry ny hafa. Samy hafa anefa ny hevitry ny olona momba ny afobe, fa mba ahoana ny hevitrao?
Aritiana: Raha ny finoanay aloha dia ny olona tena ratsy fanahy no mankany amin’ny afobe e! Any izy no mijalijaly mandrakizay.
Manjaka: Be dia be ny olona mieritreritra an’izany. Fa hono ho’aho, efa nisy zavatra ratsy be nitranga angaha teo amin’ny fiainanao?
Aritiana: Ie. Nisy namono ny zokinay vavy, dimy taona lasa izay.
Manjaka: Izany ve? Mampalahelo be izany.
Aritiana: Malahelo be azy foana aho isan’andro.
Manjaka: Misy olona mino be hoe tena misy ny afobe satria efa nampijalin’ny olon-dratsy ry zareo. Tiany hivaly amin’ireny mpanao ratsy ireny ny ratsy nataony.
Aritiana: Izay mihitsy. Tiako raha hanody an’ilay namono ny zokiko vavy ny zavatra nataony anay mianakavy.
Manjaka: Ara-dalàna aloha raha mieritreritra an’izany ianao e! Milaza koa ny Baiboly fa tezitra be Andriamanitra rehefa misy olona manisy ratsy ny olona tsy manan-tsiny. Mampanantena anefa izy fa hosaziny ny mpanao ratsy. Jereo ange ity lazain’ny Isaia 3:11 ity e! “Lozan’ny ratsy fanahy! Hahita loza izy, fa hatsingerina aminy izay nataony!” Hitanao? Azo antoka fa tsy maintsy hosazin’Andriamanitra ny olon-dratsy.
Aritiana: Dia ahoana anefa no hanasazian’Andriamanitra ny mpanao ratsy raha tsy misy ny afobe?
Manjaka: Horinganiny mandrakizay ry zareo ka. Andao ange hojerentsika ny 2 Tesalonianina 1:9 e! Azonao vakina ve azafady?
Aritiana: Tsy maninona. “Hiharan’ny sazy vokatry ny didim-pitsarana ireo, dia fandringanana mandrakizay tsy ho eo anoloan’ny Tompo.”
Manjaka: Hitanao? Tsy misy azon’ny olon-dratsy antenaina intsony satria horinganin’Andriamanitra mandrakizay ry zareo. Tsy ho velona intsony izy ireo amin’ny hoavy.
Aritiana: Eny e! Fa hoatran’ny tsy rariny raha izany. Ho faty daholo ange ny olona e! Tsy tokony ho mafy kokoa noho izany ve ny sazin’ny ratsy fanahy?
Manjaka: Tena hita mihitsy hoe olona mandala ny rariny ianao.
Aritiana: Izany mihitsy.
Manjaka: Tena tsara izany. Raha ny marina aza, dia efa nataon’Andriamanitra hahay hanavaka ny mety sy ny tsy mety isika. Faran’izay tia rariny koa izy. Rehefa mampianatra anefa ny mpitondra fivavahana hoe manasazy olona any amin’ny afobe Andriamanitra, dia toa te hilaza izy ireo fa tsy rariny ny ataon’Andriamanitra.
Aritiana: Tsy azoko.
Manjaka: Int&#7923; àry misy ohatra. Fantatrao tsara angamba ny tantaran’i Adama sy Eva.
Aritiana: Ie. Nisy hazo tsy navelan’Andriamanitra hohanin-dry zareo, nefa tsy nankatò ry zareo fa mbola nihinana ihany.
Manjaka: Tadidinao tsara. Aleo hojerentsika kely io tantara io, ato amin’ny Genesisy 2:16, 17, hoe: “Ary i Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy hoe: ‘Afaka mihinana izay laninao amin’ny voan’ny hazo rehetra eo amin’ny zaridaina ianao. Aza ihinananao anefa ny voan’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin’ny andro ihinananao azy, dia ho faty tokoa ianao.’ ” Inona no nolazain’Andriamanitra fa hitranga amin’i Adama raha mihinana an’ilay voankazo voarara izy?
Aritiana: Nilaza izy fa ho faty i Adama.
Manjaka: Izay indrindra. Mba eritrereto kely ange e! I Adama no nahatonga ny olona rehetra ho lasa mpanota.* Tena ratsy be ny nataony. Niteny ve anefa Andriamanitra hoe hosaziny any amin’ny afobe izy?
Aritiana: Tsia aloha e!
Manjaka: Aoka atao hoe hampijaliana any amin’ny afobe mandrakizay no ho sazin’i Adama sy Eva. Tsy tokony ho nolazain’Andriamanitra azy ireo mialoha ve izany, raha tena tia rariny sy be fitiavana izy?
Aritiana: Marina izany.
Manjaka: Izao anefa no nolazain’Andriamanitra tamin’i Adama sy Eva rehefa avy nanota izy ireo. Mba azonao vakina ve ny Genesisy 3:19?
Aritiana: Ie. “Amin’ny hatsembohan’ny tavanao no hihinananao hanina, mandra-piverinao amin’ny tany, fa avy tamin’ny tany no nakana anao. Fa vovoka ianao ary hiverina ho vovoka indray ianao.”
Manjaka: Misaotra. Ho aiza, hono, i Adama araka ny tenin’Andriamanitra taminy?
Aritiana: Hozy hoe hiverina amin’ny vovoka indray izy.
Manjaka: Izay indrindra. Ka matoa ny olona iray hiverina any amin’ny toerana iray, dia tsy maintsy efa tany izy taloha. Sa ahoana?
Aritiana: Izay aloha e!
Manjaka: Dia taiza i Adama talohan’ny namoronan’Andriamanitra azy?
Aritiana: Tsy nisy.
Manjaka: Izay indrindra. Hitanao angamba fa tsy niresaka afobe izany mihitsy Andriamanitra teo. Nanao ny rariny ve Andriamanitra raha niteny hoe hiverina amin’ny vovoka i Adama, nefa any amin’ny afobe izy no halefa?
Aritiana: Tsy rariny aloha izany e!
Ny Devoly ve no hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra?
Manjaka: Int&#7923; koa misy zavatra iray mila dinihina momba ny afobe.
Aritiana: Inona izany?
Manjaka: Iza moa no lazain’ny olona fa miandraikitra ny afobe sy mampijaly ny olona any?
Aritiana: Ny Devoly.
Manjaka: Ny Devoly anefa no fahavalon’Andriamanitra lehibe indrindra. Koa raha ny Devoly no asain’Andriamanitra manasazy ny olona any amin’ny afobe, tsy lasa mpiara-miasa ve izany ry zareo?
Aritiana: Mm. Izay indray no mbola tsy noeritreretiko.
Manjaka: Manan-janaka moa ianao?
Aritiana: Ie, lahikely. Vao nandray 15 taona izy.
Manjaka: Andeha hatao hoe lasa maditra be ny zanakao. Ataony daholo izay rehetra mampalahelo anao. Inona no hataonao?
Aritiana: Teneniko izy.
Manjaka: Ie. Ary azo antoka fa tsy indray mandeha fa imbetsaka mihitsy satria tianao hiova izy.
Manjaka: Andeha hatao hoe tsy raharahainy mihitsy ny teninao, na dia efa niteny azy imbetsaka aza ianao. Tsy maintsy hoe hanasazy azy amin’izay ianao. Sa tsy izany?
Aritiana: Tsy maintsy.
Manjaka: Fantatrao anefa avy eo hoe hay nisy jiolahim-boto nampirisika ny zanakao sy nitarika azy haditra. Ahoana no hataonao?
Aritiana: Tezitra be amin’izany lehilahy izany aho.
Manjaka: Marina izany. Ka raha fantatrao àry fa ilay jiolahim-boto no nahatonga ny zanakao haditra ka nampahatezitra anao, dia mbola ilay jiolahim-boto ihany ve no asainao hanasazy ny zanakao?
Aritiana: Aiza kosa e!
Manjaka: Mety àry ve raha i Satana Devoly indray no asain’Andriamanitra hanasazy ny ratsy fanahy, nefa ny Devoly no tena mampirisika azy ireo hanao ratsy?
Aritiana: Tsy mety mihitsy izany!
Manjaka: Raha ohatra koa te hanasazy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ny Devoly ve dia hankatò azy ka hampijaly an’ireo olona ireo, nefa izy no fahavalon’Andriamanitra lehibe indrindra?
Aritiana: Tsy mbola nieritreritra an’izany mihitsy aho.
Hesorin’i Jehovah ny ratsy rehetra
Manjaka: Fa azo antoka anefa hoe hanasazy ny mpanao ratsy tsy mety miova Andriamanitra. Misy andinin-teny asehoko anao farany ity. Ato amin’ny Salamo 37:9. Tsy maninona raha vakinao?
Aritiana: Tsy maninona. “Ny mpanao ratsy horinganina, fa izay manantena an’i Jehovah no handova ny tany.”
Manjaka: Misaotra anao. Hitanao ve hoe inona no hataon’Andriamanitra amin’ny mpanao ratsy?
Aritiana: Hozy hoe horinganiny.
Manjaka: Marina izany. Midika izany fa hofoanany mandrakizay izy ireo. Ny olo-marina izay lazainy hoe “manantena an’i Jehovah” kosa hiaina mandrakizay eto an-tany. Fa mety ho tianao ho fantatra angamba hoe nahoana raha hatramin’ny voalohany mihitsy dia efa nosakanan’Andriamanitra tsy hanao ratsy ny olona. Ary raha tena te hanasazy ny mpanao ratsy izy, nahoana no mbola tsy nataony izany hatramin’izao?
Aritiana: Nahoana tokoa?
Manjaka: Angamba hojerentsika ao amin’ny Baiboly indray ny valin’izany rehefa mandalo at&#7923; aho amin’ny manaraka.*
Aritiana: Eny àry.
Jereo ny Romanina 5:12.
Date: 30 juin 2016 - 11:12
Araka ny fantatra dia misy antokom-pinoana kristianina mihoatran'ny 40 000 no misy maneran-tany
Satria ny baiboly dia feno contradictions ka samy manana ny fandraisany azy ny olona
Matio 27:55 « Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo Azy. »
Marka 15:40 « Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan'ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria, renin'i Jakoba kely sy Josesy, »
Lioka 23:49 « Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka Azy avy tany Galilia dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany. »
(Jaona 19:25) « Ary nijanona teo akaikin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin'i Klopa, sy Maria Magdalena. »
=> Eo izao dia samy manana ny filazany ny filazantsara ( inona no marina akaiky sa lavitra?)
Misy versets aman'alina ny baiboly nefa versets vitsivitsy amin'ireo ihany no atao fototra ijorian'ny finoanan'ny sasany?
Ka misy ve ny helo sa tsy misy? voalaza aloha fa tena nasiaka be Andriamanitra tao amin'ny testameta taloha
Date: 30 juin 2016 - 11:44
Ohatra hafa : Mety ve ny mandainga sa tsy mety?
Azo atao ny mandainga
(Eksodosy 1:18) « Dia nampaka ny mpampivelona ny mpanjakan'i Egypta ka nanao taminy hoe: Nahoana no nanao izany zavatra izany ianareo, ka novelominareo ihany ny zazalahy? »
(Eksodosy 1:19) « Fa hoy ny mpampivelona tamin'i Farao: Tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo; fa matanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any aminy akory ny mpampivelona, dia velona izy. »
(Eksodosy 1:20) « Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona; ary nihamaro sy nihahery indrindra ny olona. »
--> Nandainga ny mpampivelona
(Jaona 7:8) « Miakara ho amin'ny andro firavoravoana ianareo; fa Izaho tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firavoravoana ity; satria tsy mbola tonga ny fotoako. »
(Jaona 7:9) « Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy Izy, dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. »
(Jaona 7:10) « Fa rehefa lasa niakatra ho amin'ny andro firavoravoana ny rahalahiny, dia niakatra koa Izy, nefa tsy mba nisehoseho, fa toa niafinafina. »
--> Nadainga i Jesosy
Tsy azo atao ny mandainga
(Apokalypsy 21:8) « Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa. »
---> Ho may ny mpandainga
Par: Fa Inona moa ny Farihy Afo? JW
Date: 01 juillet 2016 - 07:58
Fa Inona moa ny Farihy Afo?
Teny entina ilazana ny fandringanana mandrakizay ny farihy afo. Mitovy amin’ny Gehena izy io, saingy tsy mitovy amin’
Tsy farihy ara-bakiteny
Andinin-teny dimy no ahitana ny teny hoe “farihy afo” ao amin’ny Baiboly. Asehon’izy ireo anefa fa tsy farihy ara-bakiteny izy io, fa an’ohatra fotsiny. (Apokalypsy 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) Ireto avy no hatsipy ao amin’ny farihy afo:
Ny Devoly. (Apokalypsy 20:10) Fanahy ny Devoly ka tsy hahalevona azy ny afo ara-bakiteny.—Eksodosy 3:2; Mpitsara 13:20.
Ny fahafatesana. (Apokalypsy 20:14) Tsy zavatra mivaingana izy io, fa ilazana ny zavatra tsy misy aina intsony sy tsy afaka manao na inona na inona intsony. (Mpitoriteny 9:10) Tsy mety dorana àry ny fahafatesana.
“Ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka.” (Apokalypsy 19:20) Samy tsy ara-bakiteny ireo. Midika izany fa tsy ara-bakiteny koa ilay farihy afo hanipazana azy.—Apokalypsy 13:11, 12; 16:13
Hoy ny Baiboly: “Tsy inona ny farihy afo fa ny fahafatesana faharoa.” (Apokalypsy 20:14; 21:8) Ilay fahafatesana vokatry ny fahotan’i Adama no lazain’ny Baiboly hoe fahafatesana voalohany. Azo avotana amin’ny alalan’ny fananganana amin’ny maty ny olona iharan’izy io. Hofoanan’Andriamanitra koa izy io amin’ny hoavy.—1 Korintianina 15:21, 22, 26.
Hafa mihitsy anefa ny fahafatesana faharoa, izay oharina amin’ny farihy afo. Marina fa tsy afaka manao na inona na inona koa izay olona lasa any. Tsy milaza mihitsy anefa ny Baiboly hoe mbola hatsangana amin’ny maty izy ireny. Milaza, ohatra, ny Baiboly fa “manana ny lakilen’ny afobe sy ny fahafatesana” i Jesosy. (Apokalypsy 1:18; 20:13; Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques, anglisy) Midika izany fa vitany ny manafaka ny olona maty vokatry ny fahotan’i Adama. Tsy misy na iza na iza anefa manana ny lakilen’ny farihy afo, eny fa na i Jesosy aza. Midika ho fandringanana mandrakizay izy io, ary izany no sazin’izay halefa any.—2 Tesalonianina 1:9.
Tsy hatsangana amin’ny maty intsony izay lasa any amin’ny farihy afo
Par: Fa Inona moa ny Farihy Afo?, JW
Date: 01 juillet 2016 - 08:01
Teny entina ilazana ny fandringanana mandrakizay ny farihy afo. Mitovy amin’ny Gehena izy io, saingy tsy mitovy amin’ny afobe (na helo). Ny fasana misy ny maty rehetra mantsy no atao hoe afobe.
Date: 01 juillet 2016 - 08:02
Inona no dikan’ilay hoe “hampijalina andro aman’alina mandrakizay mandrakizay”?
Raha midika ho fandringanana àry ny hoe farihy afo, nahoana ny Baiboly no milaza fa “hampijalina andro aman’alina mandrakizay mandrakizay” ao ny Devoly sy ilay bibidia ary ilay mpaminany sandoka? (Apokalypsy 20:10) Andeha aloha isika hijery antony efatra manaporofo fa tsy fampijaliana ara-bakiteny izy io:
Tsy maintsy havela ho velona mandrakizay ny Devoly, raha tiana hijalijaly mandrakizay. Milaza anefa ny Baiboly fa hofoanana izy, izany hoe hatao tsy misy intsony.—Hebreo 2:14.
Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny fiainana mandrakizay fa tsy sazy.—Romanina 6:23.
Tsy ho afaka handre fanaintainana ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka, satria tsy ara-bakiteny.
Hita amin’ny fanazavana omen’ny Baiboly fa fandringanana mandrakizay no tiana holazaina amin’ilay hoe fampijaliana ny Devoly.
Mety hidika hoe tsy afaka manao na inona na inona koa ny teny hoe ‘fijaliana’ ao amin’ny Baiboly. Ilay teny grika nadika hoe “mpiambina ny fonja” ao amin’ny Matio 18:34, ohatra, dia nadika hoe “mpampijaly” ao amin’ny Baiboly sasany. Hita avy amin’izany fa mifandray ny hoe ‘mijaly’ sy ny hoe tsy afaka manao na inona na inona. Ireo fitantarana ao amin’ny Matio 8:29 sy ny Lioka 8:30, 31 koa dia mampifandray ny teny hoe ‘fampijaliana’ sy ny hoe “lavaka mangitsokitsoka”, izay midika hoe fahafatesana na toerana an’ohatra tsy ahafahana manao na inona na inona. (Romanina 10:7; Apokalypsy 20:1, 3) Imbetsaka ny bokin’ny Apokalypsy no mampiasa ny teny hoe ‘fampijaliana’ amin’ny heviny an’ohatra.—Apokalypsy 9:5; 11:10; 18:7, 10.
Date: 04 juillet 2016 - 11:40
Raha te hianatra baiboly ianao dia fantaro tsara aloha ilay finoana hianaranao baiboly. Sekta ve?
~~> Jereo ny site internet misy azy dia jereo koa ny site internet mitsikera azy
Ny atao Sekta dia tsy hoe fikambanana kely niala tamin'ny fikambanana lehibe ihany
> fa ny sekta dia mety hitondra olana ara-piarahamonina, olana ara-pianakaviana, manitsakitsaka ny zon'olombelona, ary mety hiatra aman'aina mihitsy aza
~~> Raisoko ho ohatra ny temoins de jehovah : raha hianatra baiboly amin'ny temoin ianao dia ny tanjony dia hanova anao ho témoin. Raha te ho témoin ianao dia tsy maintsy hatao batisa témoin.
1) Témoin ianao izao (Finoana hafa no nisy anao taloha fa finoana témoin no misy anao amin'izao)
> Tsy azonao atao ny mankalaza anniverssaire, saint-valenti
> Tsy manao noely, paka, pentecôte
> Tsy manao 29 mars , 26 juin
> Tsy mahazo midimiditra any am-piangonan'olon-kafa any
> Tsy mahazo mihira hiram-pirenena
=> Raha mandika ireo iano ka miziriziry dia ho esorina aminao ny maha temoin anao
Tsy azo atao ny mankalaza anniverssaire satria misy tantara anam-panjaka 2 (Fara sy Heroda) ao amin'ny baiboly izay nankalaza anniverssaire dia nisy vono olona foana. Matoa nosoratana tao amin'ny baiboly ireo dia tsy azo atao izany ny manao anniverssaire. Jereo koa fa mpanompo sampy ireo mpanjaka ireo.
-> Origine paienne ny anniverssaire dia tsy azo atao!
-> Fa ny fanaovana peratra mariazy, fanaovana fombafomba amin'ny fiancaille, sns,... toa ataon'ny témoin? Nga ireny origine témoin?
Hita avy amin'ireo fa mety hitondra olana ara-piarahamonina, ara-pianakaviana ny finoana sasany. Satria rehefa misy fety dia tsy hanatrika ry zareo.
2) Tsy témoin ianao izao fa temoin ianao taloha (Nesorina aminao ny maha temoin anao)
Esorina aminao ny maha-temoin anao raha :
> Nandika lalàna ianao (mijangajanga, mandainga, mangalatra,..., mifoka sigara, ...)
> Mitsikera ny fampianarana temoin
> Miala tsy te ho témoin intsony
Azon'olona tsirairay atao ny misafidy izay fivavana mety amin'ny. Malalaka ny olona amin'ny safidy. Zon'olobelona izany!
Refa temoin ianao dia tsy azonao tao intsony ny mandehande any amin'ny fivavahana hafa any. Tsy azonao atao ny manao tsikera.
=> Esorina aminao ny maha temoin raha miziriziry ianao. Dia ny loza dia izao, rehefa miala aminao ny maha temoin anao dia tsy mahazo miresadresaka aminao intsony ny temoin rehetra, na ny miarahaba anao aza dia tsy azo atao. Raha misy temoin tratra miray petsapetsa aminao dia esorina aminy koa ny maha temoin azy.
Hita avy amin'izany fa tsy misy fitiavana ilay izy sady manitsakitsaka ny zon'olombelona
3) Vonjy aina
Ny temoin dia tsy mahazo mihinana ràn-kena. Tsy azao atao koa ny mampiditra rà an'olona amin'ny vatana.
Tsy azo atao ny mihinana rà satria hita ao amin'ny baiboly izany. Mitovy ny mihinana drogue sy ny mitsindrona drogue. Noho izany dia mitovy ny mihinana rà sy ny mampidra rà an'olon-kafa amin'ny vatana. Tsy azo atao izany ny mampiditra rà
Ekena fa voasoratra tokoa ao anaty baiboly ny lalàna mikasika ny fihinana rà.
Fa ny mihinana rà sy ny mampiditra rà amin'ny vatana tompoko dia tsy mitovy.
Raha mihinan-kanina ianao dia ny vavony no miasa fa hafa mihitsy fiasany organe raha mapiditra rà.
Eken'ny temoin fa rehefa décomposéna ny rà dia mahazo globule rouge, plasma,...
dia ireny singa ireny azo ampidirina amin'ny vatana???
io misy sandwich = salady + fromazy + mofo.
=> Raha hohaniko tsirairay ny salady, dia avy eo ny mofo , dia avy eo ny fromazy, Tsy mitovy amin'ny mihinana sandwich ihany ve izany?
=> Betsaka ny olona maty noho io lalàna io izay tsy mifototra amin'ny baiboly fa tombatombana fotsiny.
Manitsakitsa ny zon'olombelona tsotra izao izany.
Fantaro ny zava-drehetra dia tazomy mafy izay tsara.
Hizahao toetra ny fanahy....
Par: Mino aho
Date: 04 juillet 2016 - 12:47
Inona no diploma takiana raha hianatra ho Pasitera? (FJKM io)
Namana no mampanotany ahy.
Par: Al1 sy Aleksa
Date: 04 juillet 2016 - 16:10
Misy ny miditra kolejy : niveau BEPC
Misy ny miditra faculté (oniversité) : niveau bac
Date: 05 juillet 2016 - 12:01
Miarahaba dia misaotra indrindra ny All sy Aleksa
Date: 10 juillet 2016 - 09:09
Milaza ny Baiboly fa tokony hifady ny ra isika. Tsy tokony hihinana ra àry isika, ary tsy tokony hanaiky hampidirana ra manontolo na ny taharo fototry ny ra. Diniho ireto andinin-teny ireto:
Genesisy 9:4. Navelan’Andriamanitra hihinana henam-biby i Noa sy ny fianakaviany taorian’ny Safodrano, saingy tsy navelany hihinana ny ra. Hoy izy: “"Izao ihany no tsy azonareo hanina: Ny nofo misy aina, izany hoe mbola misy ra."” Tokony hankatò an’izany ny olombelona rehetra satria taranak’i Noa daholo.
Levitikosy 17:14. “"Aza mihinana ny ran’ny nofo, na nofon’inona izany na nofon’inona, satria ny rany no ain’ny karaza-nofo rehetra, ka haringana izay mihinan-dra."” Mihevitra Andriamanitra fa ao amin’ny ra ny aina ary izy no tompon’ny aina. Marina fa ny firenen’Israely no nomen’Andriamanitra an’io lalàna io. Hita avy amin’izy io anefa fa tena tsy tian’Andriamanitra hihinan-dra ny olona.
Asan’ny Apostoly 15:20. ‘"Fadio ny ra."’ Mitovy amin’ny lalàna nomen’Andriamanitra an’i Noa ihany ny lalàna nomeny ny Kristianina. Asehon’ny tantara fa tsy nety nihinan-dra ny Kristianina fahiny, eny fa na dia nilaina tamin’ny fitsaboana aza izany.
Nahoana Andriamanitra no mandidy antsika hifady ra?
Be dia be ny aretina ho voasoroka raha tsy hampidiran-dra isika. Ny tena antony lehibe indrindra anefa dia hoe masina amin’Andriamanitra ny aina, izay ao amin’ny ra.—Levitikosy 17:11; Kolosianina 1:20.
Hita amin’ny lalàna maro nomen’Andriamanitra fa nitady izay hahasoa ny vahoakany fahiny izy. Te hisoroka loza, ohatra, izy ka nanome didy azy ireo mba hanisy arofanina ny tampon-tranony. Nampiasaina be mihitsy mantsy ny tampon-trano tamin’izany. (Deoteronomia 22:8; 1 Samoela 9:25, 26; Nehemia 8:16; Asan’ny Apostoly 10:9) Nanome didy koa izy hoe tokony hambenana izay omby mety hampidi-doza. (Eksodosy 21:28, 29) Tena tsy nihevitra izay hahasoa ny hafa izay nandika an’ireo lalàna ireo, ka nety nanana trosan-dra.
Ahoana no hampiharana ny toro lalana avy amin’ireo lalàna ireo? Manao ahoana, ohatra, ny fiaranao sy ny fomba fitondranao azy, ny biby ompianao, ny tranonao, ny toeram-piasanao, ary ny fialam-bolinao? Ny lozam-piarakodia no tena mahafaty ny tanora, any amin’ny tany sasany. Sahisahy be mantsy izy ireny matetika rehefa mitondra fiara. Tsy toy izany kosa ireo tanora te ho tian’Andriamanitra foana. Sarobidy aminy ny aina ka tsy faly manao zavatra mety hampidi-doza izy. Tsy mihevitra izy hoe tsy hiharan-doza mihitsy satria tanora. Hadalana mantsy izany! Mitandrina amin’izay mety hampidi-doza kosa izy ka mankafy ny fahatanorany.—Mpitoriteny 11:9, 10.
Date: 10 juillet 2016 - 09:19
tsy nankalaza aniversera ny mpanompon’Andriamanitra fahiny, satria mifandray amin’ny fanompoan-tsampy sy ny herin’ny maizina io fankalazana io. Azo inoana koa fa tsy nanao an’izany izy ireo noho ny zavatra ninoany. Nanetry tena mantsy izy ireo, ka tsy nihevitra hoe tena zava-dehibe ny nahaterahany dia mila ankalazaina.* (Mika 6:8; Lioka 9:48) Nanome voninahitra an’i Jehovah kosa izy ireo sady nisaotra azy, noho izy nanome ny aina izay tena sarobidy.*—Salamo 8:3, 4; 36:9; Apokalypsy 4:11.
Raha maty ny olona tsy mivadika, dia hotsaroan’Andriamanitra ka hatsangany. Azo antoka àry ny hoaviny. (Joba 14:14, 15) Hoy ny Baiboly: “Aleo anarana tsara toy izay menaka manitra, ary aleo ny andro ahafatesana toy izay ny andro ahaterahana.” (Mpitoriteny 7:1, fanamarihana ambany pejy) Inona ilay hoe “anarana”? Ny laza tsara azontsika eo anatrehan’Andriamanitra, noho isika tsy mivadika. Tsara homarihina fa tsy andro nahaterahana, fa andro nahafatesana ilay andro tokana asaina tsarovan’ny Kristianina, izany hoe ny nahafatesan’i Jesosy. Noho izy manana “anarana” faran’izay tsara mantsy no hahatonga antsika ho voavonjy.—Hebreo 1:3, 4; Lioka 22:17-20.
Faly be foana ny olona rehefa misy zaza teraka. (Salamo 127:3) Tsy misy mpanompon’Andriamanitra lazain’ny Baiboly hoe nankalaza ny andro nahaterahany anefa. Hadino fotsiny ve ilay izy? Tsia. Voalaza ao mantsy hoe nisy olona roa nankalaza an’izany, dia i Farao mpanjakan’i Ejipta sy Heroda Antipasy. (Vakio ny Genesisy 40:20-22; Marka 6:21-29.) Nisy zavatra ratsy nitranga anefa nandritra an’ireo fankalazana ireo, indrindra fa tamin’ilay an’i Heroda. Notapahina ny lohan’i Jaona Mpanao Batisa tamin’izay.
Date: 10 juillet 2016 - 09:24
FOMBAFOMBA AMIN’NY MARIAZY
Tsy ho ela dia ho ringana i Babylona Lehibe, ka “tsy hisy feon’ny mpampakatra na ny ampakarina ho re” intsony ao. (Apokalypsy 18:23) Anisan’ny antony handringanana azy ny fanarahany fombafomba mifandray amin’ny herin’ny maizina. Vao manomboka àry ny fanambadiana dia efa mety ho voaloto, raha misy fombafomba toy ireny amin’ny mariazy.—Marka 10:6-9.
Samy manana ny fombany ny firenena, nefa ilaina ny mitandrina. Misy fombafomba eritreretina ho tsy ratsy, nefa mety ho avy amin’ny fanaon’ny fivavahan-diso. Heverina ho “mahatsara vintana” ny mpanambady na ny olona asainy izy ireny. (Isaia 65:11, fanamarihana ambany pejy) Anisan’izany ny fanipazana fotsimbary, na voninkazo, na tapatapaka taratasy. Mety ho avy amin’ny finoan’ny olona fahiny izany, hoe lasa tony ny fanahy ratsy rehefa omena sakafo ka tsy hanisy ratsy ny mpanambady. Efa ela koa ny vary no noheverina ho manana hery miafina, ka manampy ny olona hiteraka sy ho sambatra ary ho ela velona. Azo lazaina hoe maloto àry ireny fombafomba ireny, ka tsy manao an’ireny izay rehetra te ho tian’Andriamanitra foana.—Vakio ny 2 Korintianina 6:14-18.
Mety hahatonga ny mariazy ho tsy mendri-kaja, na hanafintohina ny fanao sasany eto amin’ity tontolo ity. Tsy manao an’ireny koa ny mpanompon’i Jehovah. Tsy manao esoeson-teny manindrona, na miresaka an-kolaka momba ny firaisana izy, ohatra, raha mikabary. Tsy manao sangy ratsy na milaza zavatra hafa mety hahamenatra an’ilay mpanambady sy ny olon-kafa koa izy. (Ohabolana 26:18, 19; Lioka 6:31; 10:27) Tsy manao lanonana makotrokotroka be koa izy, satria “fampideraderana fananana” no hita amin’izany, fa tsy fanetren-tena. (1 Jaona 2:16) Manomana mariazy àry ve ianao? Aza hadinoina mihitsy fa tian’i Jehovah ho faly ianao fa tsy hanenina, isaky ny mahatsiaro an’io andro iray toa zato io.*
Date: 10 juillet 2016 - 14:13
Mitovy amin’ny fihinan-dra tokoa ve ny fampidiran-dra?
Matetika no ampidirina ao amin’ny lalan-dra ny hanina, rehefa tsy afaka misakafo ny marary any amin’ny hopitaly. Tena mankatò an’ilay didy ‘hifady ny ra’ àry ve izay olona manaiky hampidiran-dra, na dia mbola tsy nihinan-dra mihitsy aza? (Asa. 15:29) Eritrereto, ohatra, hoe asain’ny dokotera mifady toaka ny olona iray. Mifady ve ilay olona raha tsy misotro toaka intsony, nefa mampiditra izany ao amin’ny lalan-drany?